Fihanaky ny valanaretina maneran-tany: maherin’ny iray tapitrisa ireo matin’ny covid-19 - ewa.mg
News - Fihanaky ny valanaretina maneran-tany: maherin’ny iray tapitrisa ireo matin’ny covid-19
fanadihadiana nivoaka ny alatsinainy lasa teo, nahatratra
43 483 423 ny tranga Coronavirus voamarina amin’ny
firenena 180 anatin’ny kaotinanta dimy. 1 159 300
ireo namoy ny ainy vokatry ny valanaretina. Firenena tena ahitana
tranga maro sy olona maty betsaka ny any Etazonia, India, Brezila,
Rosia ary Frantsa, araka ny fandalinana navoakan’ny teknisianina.
Any Frantsa, ahafahana mandrefy ny fivoaran’ny valanaretina ny
herinandro maromaro ho avy. Amin’izao fotoana izao, mitovy amin’ny
zava-misy tamin’ny fotoana nirongatan’ny valanaretina voalohany
tany an-toerana ny tranga ankehitiriny ka mampanahy ny mpitsabo sy
ny mpitondra any an-toerana. Raha departemanta vitsivtisy no tena
nahitana tranga maro niditra teny amin’ny hopitaly. Saika manerana
ny firenena iray manontolo no misy ny tranga nandritra ny andro
maromaro farany. Efa mihatra ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny
alina any amin’ny faritra maro ary nahena ny ora ahafahan’ny
toeram-pisakafoana misokatra ho an’ny toerana voatondro.
L’article Fihanaky ny valanaretina maneran-tany: maherin’ny iray tapitrisa ireo matin’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Namoy ny ainy, ny talata tolakandro teo tao amin’ny Hopitalibe Toamasina, ilay renim-pianakaviana niharan’ny fanolanana tambabe nataon’ny jiolahy miisa 15, nandritra ny fanafihana tao amin’ny tokantrano iray ao amin’ny fokontany Depot Fahatelo, Toamasina.Fantatra nandritra ny fanadihadiana tany an-toerana fa efa saika isan’andro ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ao amin’ity fokontany ity sy ny manodidina, saingy hatreto, tsy mbola nisy tratra ireo jiolahy. Raha ny loharanom-baovao voaray nandritra ny fidinana tao amin’ny fokontany, tsy misy zavatra azo nalaina afa-tsy fahitalavitra “ecran plat” iray tao amin’ilay tokantrano ka antony nahatonga ireo jiolahy nanolana ilay renim-pianakaviana izany. Nofatoran’ireo jiolahy ilay raim-pianakaviana ary tsy vitan’izay fa mbola nambenana tamina basy ka nifandimbiasan’izy ireo teo ilay renim-pianakaviana. Niafara tamin’ny fahafatesany anefa izany noho ny ratra nahazo azy. Velon-taraina, araka izany ,ny fokonolona any an-toerana satria vao ny 13 jolay lasa teo koa no nisy raim-pianakaviana iray avy nahalafo akoho manatodilava niharan’ny fanafihan-jiolahy raha vao hiditra tao an-tranony. Voaambana basy sy antsy lavalela avy hatrany izy ka lasan’ireo jiolahy avokoa ny entana rehetra tao an-tranony niampy ireo vola vidina akoho hatramin’ny fitaovana tany an-dakozia.Nambaran’ny sefom-pokontany ao an-toerana fa tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky ny hametrahana “poste avancé”-n’ny zandary ao amin’izy ireo hialana amin’ny tranga toy izao.SajoL’article Fanafihan-jiolahy tao Depot Toamasina: maty ilay renim-pianakaviana niharan’ny fanolanana tambabe a été récupéré chez Newsmada.
Taorian’ny faritra Vakinankaratra sy Menabe dia nidina tany amin’ny faritra Betsiboka indray ny ekipan’ny ANOR (Agence Nationale de la Filière Or). Nihaona amin’ireo mpiantsehatra amin’ny sehatr’asa momba volamena, ireo vondrom-bahoaka itsanjaram-pahefana tao amin’ny kaominina Maevatanana I sy II, Beanana, Mahazomà, Berivotra 5/5, Andriba ary Antsiafabosotra izy ireo tao anatin’ny andro maromaro. Ny fampidirana ireo mpandraharaha momba ny volamena ao anatin’ny ara-dalàna no tanjon’izao fitsidihana mitohy vakana izao, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny ANOR. Nandritra fivoriana niarahana tamin’ireo mpisehatra no nampatsahiavan’ny ANOR ny lalàna mifehy ny volamena eto amintsika. Teo ihany koa ny fitadiavana paikady iraisan’ny rehetra mba hidirana ao anatin’ny sehatra ara-dalàna. Tsikaritra nandritra ny fidinana nataon’ny ANOR fa anisany mampihena ny vola miditra amin’ireo kaominina notsidihana ny fisian’ireo mpisehatra tsy manara-dalàna. Raha ny tokony ho dia mandoa « impôt synthétique » ny mpandraharaha momba ny volamena saingy noho izy ireo tsy ao anatin’ny ara-dalàna dia ny antsasany amin’izany ihany no hefain’izy ireo. Eo ihany koa ny tsy fampiasàna ny rejistra izay fomba tokana hitsirihana ny fivezivezen’ny volamena. Ankoatra izany dia mampitarazoka ny fampidirana ireo mpandraharaha amin’ny ara-dalàna ihany koa ny fifandaminana anatiny amin’ny samy mpandraharaha. Miteraka fifanjevoana amin’ireo mpitrandraka mandinika ny fisehoan’ny mpanome fahazoan-dalana eny amin’ny toeram-pitrandrahana. Noho ny fidinan’ny ANOR tany amin’ireo kaominina dia nifanaraka ireo mpiantsehatra nanaovana fihaonana fa samy hanara-maso sy hitsirika ny sehatra tandrify azy avy. Mitaky ny firaisan-kinan’ireo sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana ny fampiharana ny paikady fitantanana amin’ny seha-pihariana momba ny volamena. Ilaina ihany koa ny fampahafantarana ny sazy miandry ireo tsy manara-dalàna. Lynda A. Cet article ANOR: Nifanaraka ireo mpandraharaha momba ny volamena est apparu en premier sur déliremadagascar.
Pilo kely #4484 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4484 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Kianja – Filohan’ny ligin’Atsinanana: tsy mankasitraka ny lalaon’ny Barea hatao ao Barikadimy
Manakana ary tsy mankasitraka ny hanaovana ny lalao hifanandrinan’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, ao amin’ny kianja Barikadimy Toamasina, i Andry Herinjatovo Marcel, filohan’ny ligin’Atsinanana.Hatairana ny an’ny rehetra, nandritra ny fivoriana notanterahina tao amin’ny efitrano malalaky ny lapan’ny Tanàna Toamasina, ny zoma 2 oktobra lasa teo, naheno an’i Andry Herinjatovo Marcel, filohan’ny baolina kitra Atsinanana, nanambara fa tsy mankasitraka ny hanaovana ny lalaon’ny Barea sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, any Toamasina, ny ligy tarihiny sy ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Naheno izany avokoa ireo mpivory rehetra tao toy ny solontenan’ny mpitandro filaminana telo tonta, ny kaominina Toamasina renivohitra, ny Jirama ary ireo solontenan’ny vondron’ny mpitia kitra sy ny Barea. Samy nanameloka avokoa io teny nataon’ny filohan’ny ligin’Atsinanana io ny rehetra toy ireo mpivaro-kena ao Bazaribe sy ao Bazarikely izay manana klioba mifaninana. Raisin’izy ireo ho tsy fitiavana ny faritra Atsinanana izany. Noporofoin’izy ireo fa na azo jeren’ny besinimaro na atao “à huis clos” ny fihaonan’ny Barea sy i Côte d’Ivoire, tombontsoa maro ny ho azon’ny faritra Atsinanana, tsy eo amin’ny lafiny fanatanjahantena ihany fa ny fanananana fotodrafitrasa manara-penitra, ny lafiny fizahantany ivelany sy anatiny, ny vola hiditra amin’ny trano fandraisam-bahiny sy ny fitaterana manginy fotsiny.Mety ho ao ambadika ny ligyTsy tongatonga ho azy ny olana sy ny tranga hafahafa miseho momba ny fanesorana ireo mponina manorin-trano manodidina ny kianja Barikadimy. Na izany aza, mandroso ny asa raha ny ao anatiny fa voahelingelina kosa ary tombanana ho mbola tsy mifanaraka amin’ny fenitra takin’ny Caf ny ety ivelany toy ny tsy mbola fahavitan’ny lalana mivoaka sy miditra ny vavahady atsinanana sy atsimon’ny kianja, mbola voasakan’ireo tranon’ny fokonolona anarivony tafo eo ho eo.Hampangain’ny rehetra fa mety ho ao ambadik’izao tranga izao ny ligin’Atsinanana, mampirisika ireo mponina tsy handrava ny tranony. Raha mitohy izao, ahina tsy ho tratra ny fe-potoana hanaovan’ny Caf fitsirihana ka hanomezana fankatoavana ny kianja. Sajo L’article Kianja – Filohan’ny ligin’Atsinanana: tsy mankasitraka ny lalaon’ny Barea hatao ao Barikadimy a été récupéré chez Newsmada.
Dren Bongolava: vondrona miady amin’ny herisetra
Manoloana ny herisetra sy ny fanolanana miseholany tato ho ato, nanapa-kevitra ny Dren Bongolava hanangana ny « club de lutte contre la violence » na ny vondrona miady amin’ny herisetra.Hatsangana eny anivon’ny sekoly tsirairay izany vondrona izany ka handrafitra azy ny solontenan’ny mpampianatra, ny mpianatra, ny ray aman-dreny sy ny solontena avy ao amin’ny Oolisim-pirenena.Vokatry ny dinika nifanaovan’ny talem-paritry ny filaminam-bahoaka sy ny kaomisera tao Tsiroanomandidy izany, ho fametrahana paikady iombonana hiadiana amin’ny fanolanana sy ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy na maha vavy.Maro ireo paikady hapetraka amin’izany, toy ny ady atao amin’ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fiparitahan’ny horonantsary mamoafady. Hisy ny fidinana ifotony hanaovana fanentanana ireo mpianatra tsy hidoroka sy hirona amin’izany fa kosa hanana fahasahiana raha misy tranga hita na mihatra.Entina hiarovana indrindra ireo tanora mpianatra tsy hidonana-poana ny vondrona natsangana. Hiarovana azy ireo amin’ny herisetra sy ny fanararaotana ary ny fanangolena amin’ny endriny samihafa ihany koa.Tatiana A L’article Dren Bongolava: vondrona miady amin’ny herisetra a été récupéré chez Newsmada.